Ọ̀mụ̀ntụdị: Ọdịiche dị n'etiti nyochagharị - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Ọ̀mụ̀ntụdị: Ọdịiche dị n'etiti nyochagharị
Orübà nà ógè 17:40, 6 Ọnwa atọ 2022
1,605 bytes removed , 3 months ago
Orübà nà ógè 12:06, 31 Ọnwa asatọ 2021 (mèzi)
Deborahjay (kwuó | mmetara)
(→‎Quantum Mechanics: wikilink x5 (4 red))
Orübà nà ógè 17:40, 6 Ọnwa atọ 2022 (mèzi) (me la àzụ)
Juliegwen (kwuó | mmetara)
==== Mkpụrụ édé íshí ====
'''Ọ̀mụ̀ntụdị''' bu ihe nmuta eji a muzutara ihe chi kezutara na uwa. Obi nmetuta ya gbara mbara, ka o metuluelu nkpulu nke npedebe di ka electrons na subatomic particles nke ndi ozo we metulue ihe di ukwu ka kpakpando na galaxies na oba nbudebe. Ihe nchu na ọ̀mụ̀ntụdị bu i kedozue ihe nile nke chi kezutara na uwa na otu ama. Otu e site a mara ije nke anwa di na mathematics na echezute logic. Ka anyi nyote otu nke a: Na ọ̀mụ̀ntụdị, e nwe ife a kporo [[electromagnetism]]. Onye jide magnet were nodu igwe nso, o ga nute force ga soro ya. O ga kwute kwaa ya nso, o ga nyoputa na force soro ya ga elite kwaa enu. O masiri Physicists i chotara otu ozuzu force soro igwe na magnet zuputara, ka o si bulu na ndi oge ochie chotara na(''Maka Magnetism nkiti'')
Statistical Mechanics buru ọ̀mụ̀ntụdị e ji a zugutara ngbakote ihe rikpo nne, luelu otu ha ga enwe ike i guzuta ya ka oburu ka o buru na probability density flow na kwachiga ya, nke a ka o ji buru na statistical mechanics putara na ọ̀mụ̀ntụdị nke ndi ozo di kali na nkpuru. Otu ora ma kali Statistical mechanics buru ''Thermodynamics'' ma na ezi ama ya buru na Thermodynamics sitere na statistical mechanics were puta. Ndi umu nwoke nke ukwu guzuputara nguzuputara na statistical mechanics buru ndi otu Ludwig Boltzmann, Albert Einstein, Peter Debye na ndi ozo. Nkpuru ihe chizutara na statistical mechanics soro Boltzmann Equation:
ebe <math>k</math>&nbsp;=&nbsp;1.3806505(24)&nbsp;×&nbsp;10<sup>−23</sup>&nbsp;[[Joule|J]]&nbsp;Kelvin|K<sup>−1</sup> bu Boltzmann constant na ogugu onu nke ''e'' buru '''log''' noro na equation. Nkowa ya buru na '''S''', entropy putara na oke ozuzu(system) obuna soro otu microstates di iche iche ya ra lute na phase space.
Microstate buru otu oke ozuzu nwere ike i soro. Di ka, mmadu na a ga ije, o nwere ike i ga uzo nke aka nni, o nwe kwaa ike i ga na uzo aka ekpe ma o bu na enwere ihe di ka aja no chie ya uzo, na nke anwa, microstate a bulu i ga uzo aka nni na i ga na uzo aka ekpe na ha gbara onu ogugu ra lute lue onwe ha. Ma na obu na o nwe aja nochie nwoke anwa uzo, ha ma enwe zi microstate nke nje uzo aka ekpe. Ha ma sie
na entropy nke uzo aka nni kali entropy nke uzo aka ekpe. Obu na e welu nkpuru ikuku ka o nochie nwoke anwa na ga ije, onye nwe ike i nyoputa na nkpulu ikuku ga cho kali ngabanye na microstate ra kali na ibu. Otu ha zukedotara equation nke Boltzmann na ọ̀mụ̀ntụdị buru i nyotara na:
Ewepụtara na https://ig.wikipedia.org/wiki/Ihü_kárírí:MobileDiff/73426